How to Get a Business Loan with Bad Credit - Sicko News
Sidaad horeba u ogtahay, sii wadista dhibcaha celcelis ahaan celcelis ahaan aad u muhiim ah iyada oo la wado ganacsi yar. Tani waxay gaar ahaan muhiim u noqon kartaa markii aad ugu baahan tahay raasamaal dheeri ah oo shaqeynaya, oo aad ka fiirsaneyso inaad dalbato amaah deyn ganacsi oo yar oo laga soo amaahdo amaahiye. Nasiib darrose, haddii buundadaada dhibcuhu ay hooseyso, waxay ku adkaan kartaa inaad hesho oggolaansho maalgelin ah.
Maqaalkan barta internetka, waxaan ku bixin doonnaa talo bixinno ku saabsan sida loo helo amaah ganacsi oo leh amaah xun, marka lagu daro dhowr siyaabood oo lagu dhiso kalsoonida ganacsiga iyo kor loogu qaado fursadahaaga helitaanka oggolaansho. Aynu bilowno, si meheraddaadu u hesho maalgelinta ay u baahan tahay!
7 Siyaabood oo Lagu Helo Deyn Ganacsi Yar Oo Ay Leedahay Dhamaadka Xun
1. Shuruudaha Natiijooyinka dhibcaha dhibcaha ee Daraasadda Daraasadda
Marxaladaha hordhaca ah, samee cilmi-baaris oo go’aanso deyn-bixiyeyaasha bixiya amaahda milkiilayaasha ganacsiga yaryar ee leh amaah xun. Tani waxay gaar ahaan muhiim noqon doontaa haddii dhibcahaaga amaahda ay ka yar yihiin 500. Deyn-bixiyeyaasha qaarkood ayaa waxyar deyn u leh tan, laakiin haddii dhibcahaagu ka yar yihiin 500, waxay ka dhigi karaan kuwa wax amaahda inay ka baqaan inay kula shaqeeyaan.
Ha ku khasaarin waqtigaaga inaad wax dalbato amaahiye haddii aadan buuxinin shuruudaha dhibcaha dhibcaha ugu yar. Taabadalkeed, diirada saar dariiqooyinka lagu dhisi karo dhibcaha ganacsiga, oo dalbo amaah ganacsi marka dhibcahaagu fiicnaado. Haddii aad ku sugan tahay meel aad u burbursan oo aad ugu baahan tahay raasamaal dheeraad ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, iskuday oo raadso amaah bixiye leh dhibcaha dhibcaha ugu hooseeya.
2. Abuur Qorshe Ganacsi Cad
Markii aad dalbanayso amaahda ganacsiga yar yar oo leh dhibco dhibco hooseeya, way ku caawin doontaa inaad haysatid qorshe ganacsi oo abaabulan oo aad la wadaagi kartaan amaahiyaha. Tani waxay u badan tahay inay caawimaad ka gaysato sidii aad uga dhaadhicin lahayd inaad maarayn karto shuruudaha dib u bixinta.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad diyaar u noqotaa inaad la wadaagto xaddigaaga iibka billaha ah. Waxaan rajeyneynaa inaad awood u yeelan doonto inaad muujiso horumar xaga dhaqaalaha ganacsigaaga waqti ka dib. Xitaa haddii buundadaada dhibcuhu aysan aheyn mid adag, amaahiyaha ayaa laga yaabaa inuu aad ugu fiican yahay inuu kula shaqeeyo haddii ay arki karaan in dhaqaalahaaga uu ku socdo kor u kaca koritaanka.
Qayb kale oo ay tahay inaad ku soo dartid qorshahaaga ganacsi waa macluumaad ku saabsan sida aad qorsheyneyso inaad u isticmaasho amaahda. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad qorshaynayso inaad adeegsato amaah aad ku iibsato qalab cusub. Ku sharax tan qorshahaaga ganacsi oo sharrax sida u isticmaalidda amaahdan kharashkan waxay uga faa’iideysan doontaa dhaqaalaha ganacsigaaga muddada-dheer.
Tusaalaha qalabka, waxaad ku sharixi kartaa sida mar aad u cusbooneysiiso qalabka, waxaad awood u yeelan doontaa inaad u adeegto macaamiil badan (iyo waliba inaad kasbato iibyo badan). Tani waxay ka dhaadhicin kartaa amaah-bixiye inuu kula shaqeeyo, xitaa haddii aadan haysan dhibco dhibcaha amaahda ugu fiican.
3. Diyaar u Noqo Inaad Heshid Heer Sare
Markaad ka dalbanayso raasamaal shaqo oo aad ka hesho amaah bixiye, waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso sicirka ay ku siinayaan. Haddii meheraddaada ay leedahay dhibco dhibco hooseeya, waxay kugu horseedi kartaa inaad hesho qiime ka sareeya kan meheradda oo leh dhibco celcelis celcelis ahaan sarre Tani waa sababta oo ah amaah-bixiyuhu sida caadiga ah wuxuu kuu qiimeyn doonaa inaad tahay macmiil khatar sare leh.
Sidaas awgeeda, waa inaad ka fekertaa haddii meheraddaada ay awood u yeelan doonto inay si mas’uuliyad leh u soo celiso xaddiga amaahda. Haddii aadan u maleynaynin inaad awoodi doontid inaad awoodo inaad bixiso lacagaha amaahda adoo sidoo kale sii wadaynaya meheraddaada ganacsi, waxaa fiicnaan laheyd inaad sugto intaad amaah bixinayso.
4. Qaad talaabooyin aad ku wanaajineyso dhibcaha dhibcahaaga
Hadaad ka dhab tahay inaad hesho amaah ganacsi inkasta oo dhibcahaaga amaahdu xun tahay, jawaabtu way fududahay: hagaajinta dhibcaha dhibcahaaga kahor intaadan dalban. Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad fiiriso warbixinta amaahdaada ganacsiga si aad u aragto natiijadaada oo aad u go’aamiso haddii ay jiraan wax is-dabamarinno ah. Haddii ay jiraan, waxaad u baahan doontaa inaad u soo sheegto arrimahan dhammaan xafiisyada deynta si markaas natiijadaada loo habeeyo.
Waa muhiim in la garto in kor u qaadista dhibcuhu aysan ahayn wax aad ku guuleysan karto habeen dhan. Inaad hesho dhibco wanaagsan waxay kaaga baahan doontaa inaad sameysato caadooyin maaliyadeed oo caafimaad qaba, ka dibna caddeyso mas’uuliyaddaada maaliyadeed ee deynta xafiisyada waqti ka dib. Tani waxay noqon kartaa jahwareer haddii aad ubaahantahay amaah sida ugu dhaqsaha badan, laakiin waxay noqon kartaa sharadkaaga ugu fiican.
Haddii aadan ku degdegin inaad hesho maalgelin, waa inaad diirada saartaa kor u qaadista dhibcahaaga, ka dibna xoogga saar sidii aad u dalban lahayd. Hubso inaad sii waddo aqrinta, maxaa yeelay # 7 waxay leedahay qaab sahlan oo laguugu caawiyo dhisida sumcadda ganacsigaaga.
5. Raacso Horumar Lacag Ganacsi
Haddii aad xiiseyneyso ikhtiyaariyada amaahda ganacsiga yar yar laakiin aad leedahay dhibco deyn shaqsiyadeed oo hooseeya, waxaad ku fiicnaan laheyd inaad codsato hormarinta lacagta kaash ah.
Hordhac kaashka ganacsigu waa nooc ka mid ah maalgelinta ganacsiga, laakiin maahan amaah. Markaad hesho lacag kaash ah, waxaad heli doontaa maalgalin hal mar ah, taas oo ay ku beddelato bixiyaha hela boqolkiiba boqolkiiba iibka kaarkaaga deynta. Marka, xitaa haddii dhibcahaaga amaahdu ka hooseeyaan celcelis ahaan, haddii aad leedahay iibsi kaararka deynta ganacsiga ee joogtada ah wali waad uqalmi kartaa sheygan.
Inta lagu gudajiro howsha dalabka lacagta ee ganacsatada, bixiyaha maalgelinta wuxuu raadsan doonaa lacag badan oo dhigaal ah oo qadar yar ah. Sidaa darteed, buundadaada sumcadda liidata waxay noqon kartaa
iska indha tiraa haddii aad ka soo baxdid shuruudaan.
6. Weydiiso qaraabada ama saaxiibbada lacag
Haddii aad ku xidhan tahay oo aad u baahan tahay maalgelin deg-deg ah si aad ganacsigaaga u socodsiiso, ka fikir inaad weydiiso saaxiib ama qoyska lacag xoogaa ah.
Kuma talin karno inaad amaah ka qaadatid qof aad jeceshahay, laakiin haddii aad ogtahay qof diyaar u ah inuu ku siiyo lacag aad ku hesho ilaa aad ka dalbanayso raasamaal shaqo, isla markaa waad hagaajin kartaa sumcaddaada ganacsiga isla waqtigaas. Kadib, marka dhibcaha dhibcahaagu kordhaan, waxaad ka dalban kartaa amaah amaah ama khad deyn bixiye kale!
7. Ku Bixi Biilalkaaga Wakhtigaaga
Mid ka mid ah qaababka ugu fudud ee lagu horumarin karo dhibcaha dhibcahaagu waa inaad ku bixisid biilashaada wakhtigeeda ama kahor ka hor. Bixinta biilalka waxay noqon kartaa qayb wax ku kordhisa sababta aad u leedahay dhibco dhibco dhibco hooseeya, sidaa darteed tan ka dhig muhiimadda hore u sii dhaqaaqidda. Hoos waxaa ku yaal, waxaad ka heli doontaa dhowr dariiq oo aad ku xaqiijin karto inaad biilashaada waqtigeeda ku bixiso.
Samee xusuusinta kalendarka billaha ah: Haddii aad had iyo jeer iska iloowdo inaad la kulanto waqtiga kama dambeysta ah ee biilka, waxaan soo jeedineynaa dejinta ogeysiisyada jadwalka taariikhda oo ku xasuusin doona sida taariikhda loo qabtay ay soo dhowdahay.
Muuji miisaaniyadaada: Haddii aad bixinaysid biilasha ka dib waqtigoodii ugu dambeeyay sababta oo ah waxaad ku gaabineysaa qulqulka lacagta, waa inaad hagaajisaa miisaaniyaddii ganacsigaaga horay u socotaa si aad awood ugu yeelato inaad iska bixiso kharashyada billaha ah.
Isticmaal barnaamijyada: Waxaa jira barnaamijyo maaliyadeed oo fara badan oo ka caawiya milkiilayaasha ganacsiga inay bixiyaan oo ay maamushaan biilashooda. Haddii aad xiisaynayso teknolojiyada noocan ah, eeg barnaamijyada sida Mint, TimelyBills, iyo Monitor Biilasha.
Markaad isku daydid talooyinkan, way kuu sahlanaan doontaa inaad biilashaada ku bixiso taariikhohooda, oo ayduna kasbato dhibcaha buundada wanaagsan
Amaahada Ganacsiga ee Buundada Liidata: U-qalmitaanka ayaa Suuragal ah
Waxaan rajeyneynaa in qoraalkani ku siiyay fikrado wax ku ool ah oo ku saabsan sida ganacsiga loo amaahiyo amaahda shakhsiga ah ee xun ama amaah ganacsi! Ha niyad jabin markii aad socoto howshan, waxaa jira amaah bixiyeyaal halkaas ku bixin doona amaahda milkiilayaasha ganacsiga yar yar ee leh taariikhda amaahda xun.
Haddii aad heshay amaah deyn ganacsi oo xun ama aad si guul leh kor ugu qaadday dhibcahaaga oo aad u oggolaatay in laguu oggolaado maalgelinta, nala wadaag talooyinkaaga ugu sarreeya qaybta faallada ee hoose!
how to How to Get How to Get a Business Loan How to Get a Business Loan with How to Get a Business Loan with Bad Credit How to Get a Business Loan with Credit